အံ့ဖွယ်လေးချက် သူခိုးနှက် Shoplifting | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အံ့ဖွယ်လေးချက် သူခိုးနှက် Shoplifting
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 10, 2014 in Community & Society, U.S. News | 10 comments
ဒီစာဖတ်နေတဲ့ အချိန်သုံးမိနစ် အတွင်းမှာ ယူအက်စ် လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှနေ ပစ္စည်းအမျိုးအမယ်ပေါင်း ၁၅၀၀၊ ပမာဏအားဖြင့် အကြမ်းဖျဉ်း ဒေါ်လာနှစ်သိန်းဖိုး အခိုးခံနေရသည်။
သချာင်္ဂဏန်းချ တွက်လိုက်လျင် အလစ်သုတ်မှု နှစ်သောင်းငါးထောင် နာရီတိုင်း ဖြစ်ပွားနေပြီး နေ့စဉ်ဆိုပါက ငါးသိန်း ထက်မက ရှိပေမည်။
အဲလိုမြင်တတ်ရင် ကိုယ့်ဆိုင် အလစ်သုတ်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ လိုအပ်နေပုံအား ရှင်းလင်းစွာ သိနိုင်သည်၊ အထူးသဖြင့် ယခုလို နှစ်ကုန်ဈေးရောင်းရာသီ လူရှုပ်ချိန်တွင် ဖြစ်သည်။
အလစ်သုတ်မှု ပြသနာဟာ ရှုပ်ထွေးပွေလီတာမို့ ရာဇဝတ်မှုမြောက် ပြစ်မှုဖြစ်ပေမဲ့ ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်း နယူးယောက်အခြေစိုက် ConvergEx Group ဈေးကွက်ဗျူဟာ အရာရှိချုပ် နစ်ကိုလတ် မှဆိုသည်။
(၁) အသက်ကြီးလေ ပိုခိုးလေ
လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်း လူဆယ်သန်း အလစ်သုတ်မှုဖြင့် အဖမ်းခံရသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၇၅%၊ ဆယ်ကျော်သက် ၂၅% ဖြစ်ကာ ကျား၊မ လိင်အချိုးအစားမှာ အတူတူဖြစ်သည်။ ကိုလတ်က ၎င်းအနေဖြင့် အဆိုပါ ရာဇဝတ်မှုနှင့် စီးပွားရေး ခိုင်လုံသော ဆက်နွယ်မှု သိရှိရန် ၂၀၀၈ခုနှစ် စီးပွားကပ်ဆိုက်ချိန်မှစ၍ အသေးစား ခိုးမှုများ မြင့်တက်လာမလာ စီမံချက်ချ လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်အရ လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်အတွင်း အပြင်လူ အလစ်သုတ်မှု ၉၀% ကြောက်မက်ဖွယ် ဖောင်းပွလာသော်လည်း အတွင်းလူ (သို့) ဆိုင်ဝန်ထမ်း ခိုးမှုမှာ နှစ်စဉ် လေးရာခိုင်နှုန်း သာမန်တိုးပွားလျက် အမှုပေါင်း ၇၁ ၀၀၀ ရှိသည်။
(ခ) သူခိုးဖမ်းပွဲ မရိုးဆန်းဆဲ
စီးပွားပျက်ကပ် မဆိုင်ခင် လူခြောက်သိန်း အလစ်သုတ်မှုဖြင့် နှစ်စဉ် အဖမ်းခံရသော်လည်း ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင် အဆိုပါ ပြစ်မှုပေါင်း တသန်းကျော်သွားသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျင် အချိန်ကာလတူအတွင်း အဖမ်းခံရသော ဆိုင်ဝန်ထမ်းနှုန်းမှာ လေးရာခိုင်နှုန်းမျှသာ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ အပြင်လူခိုးသော ပစ္စည်းတန်ဖိုးမှာ ပျမ်းမျှ ၁၂၉ဒေါ်လာ ဖြစ်၍ အတွင်းလူကြံလျင် ဒေါ်လာ ၇၀၀ကျော်ဖိုးအထိ ဆုံးရှုံးတတ်ကြောင်းကိုတော့ သတိပြုရန်လိုသည်။
(ဂ) ပုလိပ်အီးပေါက် သူခိုးမကြောက်
ဆိုင်ရှင်နှင့် အလစ်သုတ်သမားများ၏ ဖြေကြားချက်တွင် ထိုရာဇဝတ်ပြစ်မှုများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြစ်ပွားနေယုံမျှမက အမြတ်အစွန်း အလွန်ကြီးမားကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရသည်။ အလစ်သမား ၃%သာ သူတို့ကိုယ်သူ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သူခိုးအဖြစ် ခံယူသည် (ပြန်လည်ရောင်းချရန် ခိုးယူခြင်း)။ အလစ်သုတ်သူများ ဝန်ခံချက်အရ ၎င်းတို့ အဖမ်းမခံရချိန်အထိ ပျှမ်းမျှ ၄၈ကြိမ် ခိုးယူပြီးဖြစ်သည်။ ခိုးယူမှုနှင့် ဖမ်းဆီးရရှိမှု အချိုးအစားအား လျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ တွက်လျင်ပင် ၃၀း၁ ရှိနိုင်ကြောင်း ကျွမ်းကျင်သူများ ခန့်မှန်းသည်။
(ဃ) သူခိုးလား လူရိုးလား
ပိုက်ဆံပေးဝယ်သူကို အရှင်သခင်လို လက်လီအရောင်းဆိုင်များ ဆက်ဆံဖို့လိုပေမဲ့ လူစည်ကားရာ ဈေးဝယ်အများဆုံး စတိုးဆိုင်များဟာလည်း အလစ်သုတ်သမားများဒဏ် အခံရဆုံး ဖြစ်လို့နေသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအား သူ့အထပ်နှင့်သူ စနစ်တကျ စီစဉ်ထားသော နေရာများတွင် အလစ်သုတ်မှု အနည်းငယ်ပို၍ပင်များကြောင်း တွေ့ရသည်။ (ခိုးရတာ မျက်စိ မမှောက်လို့ နေပါမယ်၊ စဂါးချပ်။) ဆိုင်အလစ်သုတ်သမား ဖမ်းဆီးရမှု နှစ်ဆနီးပါး တိုးလာခြင်းအား စီးပွားရေးကြောင့်ဟု ကောက်ချက်ချလျင် မှားယွင်းသည်။ ခေတ်မှီထောက်လှမ်းရေး ကိရိယာ၊ နည်းပညာများတွင် တစိတ်တပိုင်း တာဝန်ရှိပြီး လူမှုရေးနှင့် စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကဲ့သို့ စိတ်ပိုင်းခံစားချက်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။
ကြောင်သခိုး မှောင်တန်ခိုး ရောင်သဖြိုး ချောင်မတိုး..
ဘာသာပြန် ရည်ညွှန်း။ http://finance.yahoo.com/blogs/breakout/what-a-steal–4-surprising-facts-about-shoplifting-200730525.html
With numbers like that, it’s easy to see why taking part in, and protecting your business from, shoplifting is suchahuge problem — especially this time of year when the stores are extra crowded.
“Over the last five years, ten million people have been caught shoplifting,” Colas says in the attached video. “They’re about 75% adults, 25% juveniles, and they’re equally split between men and women.”
အလုပ်သစ် အနေနဲ့ အလစ်သုပ်စားရင် ကောင်းမားးးး
ချွေးမွလေး အလုပ်သစ်လုပ်ရင် ဟောဒီယောက်ခမွကိုခေါ်ပါအေ။ အတော်ကိုက်မယ်ထင့်
အနော်ယဲ အားကျမခံ ဖားရိုက် ရရင်ကောင်းမားးးးးးးးးး
သခိုးဖမ်း အင်းဂျက်တွေကို မူပိုင်တင်သွင်းပီး
ရောင်းစားရရင် ကောင်းမလားဘဲ …
သူခိုးဖမ်းတာတို့.. ပစ္စည်းပျောက်ရှာတို့အတွက်.. အင်းအိုင်စမတွေများတကယ်ရှိရင်..
မြန်မာတွေသေသေချာချာ သုတေသနလုပ်ဖို့.. နည်းလမ်းပညာထုတ်ပြဖို့ကောင်းတယ်..
ကိုရင်ကြောင်တကောင်..အဲ..တယောက်များ.. စာနဲ့ပါတ်သက်တဲ့.. ကြောင်ပုံတွေဘယ်လိုရှာတယ်မသိ..
သဂျီးသိဖို့ အဲလို အင်းအိုင်လက်ဖွဲ့ အစောင့်ဆိုတာ ဆိုင်ရာနတ်၊ဘီလူးတွေ ပံ့ပိုးမှုလိုတယ်။ သူတို့မှာလည်း ကွန်ပြူ တာလိုပဲ လုပ်ပေးနိုင်စွမ်း အကန့်အသတ်ရှိတယ်။ စက်မဟုတ်တော့ အသုံးကျတယ်ဆိုပြီး သိန်းသောင်းချီ ထုတ်ထားခိုင်းစားလို့မရဘူး။ လူများများသုံးလေ ရဖို့ပိုခက်လေ၊ ဒါမှမဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်ကျလေပဲ။ သဂျီးသာ သမီးတော် သံစဉ်ခိုင်လေးကို ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပါ၊ ကြောင်ဆိုတာ ငါးကြော်သော လူသော နားမလည်ဘူး၊ ကြိုက်လျင် ချီသွားမှာပဲ… ဒက်ကလုပ် ဒက်ကလုပ်…
ဟိုတလောက ကွန်ပူတာဆိုင်မှာ မိသားစုလိုက်ခိုးသွားတာ ဦးကြောင်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေလားဟင်
. ခိုးတယ်ဆိုတာ နာမည်သာမကောင်းတာ
. ရသမျှက အသတင် ကိုယ့်အတွက်ချီးဘဲ